Iselfowuni yam ibiwe.Ndifanele ndenze ntoni? Ungayibuyisela | Iindaba zeGajethi
Kwiminyaka embalwa edlulileyo, ukubiwa kwesipaji semali yethu okanye ukulahleka yenye yezona meko zinzima ezinokwenzeka kuthi, kungekuphela ngenxa yemali esinokuyiphatha kwisipaji sethu, kodwa nangenxa yamakhadi etyala kunye namaxwebhu, nangona Kuyinyani ukuba banokurhoxiswa ngokukhawuleza okanye bacele ikopi, inkqubo iya kuchitha ixesha elibalulekileyo.
Kodwa njengoko iteknoloji iguqukile, ukuxhomekeka kwethu kwii-smartphones kuye kwanda, ukufikelela kwinqanaba lokuba yinto enokusenzakalisa kakhulu ukuba siphulukene nayo, nangaphezulu kwiphothifoliyo uqobo, kuba ngaphakathi siphethe amakhadi ethu etyala, ipassword, idatha yobuqu ... Kodwa ndenza ntoni ukuba mobile yam ibiwe?
Okokuqala, kufuneka siqiniseke ukuba ifowuni yethu ephathekayo ayibiwe, kodwa ukuba ilahlekile nje kwaye sayishiya ilibalekile. Zombini i-Android kunye ne-iOS zibeka kwizixhobo zethu zokulahla ezisivumela ukuba sazi ngalo lonke ixesha indawo esikuyo, nangona ezi ziphelelwe yibhetri, ukuba nje olu khetho lokugqibela luvuliwe, ukhetho olungakhethwanga ngokwendalo kwi-iOS, ngokumangalisayo ngokwaneleyo.
1 Ukubaluleka kokukhusela ukufikelela kwisiphelo sethu
2 Uyifumana njani ifowuni yam ukuba ndiyilahlile
2.1 Uyifumana phi i-smartphone kwi-Android
2.2 Uyifumana njani i-smartphone ye-iOS
3 Andilahlekanga ngefowuni, ibiwe
3.1 Thumela umyalezo kunye nedatha yethu kwi-smartphone yethu ye-Android
3.2 Thumela umyalezo kunye nedatha yethu kwi-iPhone yethu
4 Yintoni ukusetyenziswa kokuthintela isiphelo sendlela?
5 Uyifumana phi ifowuni IMEI
Ukubaluleka kokukhusela ukufikelela kwisiphelo sethu
Iiterminal zanamhlanje zisinika iindlela ezahlukeneyo zokhuseleko ukwenzela ukuba kwimeko yokulahleka okanye ukubiwa, azinakufikeleleka nangaliphi na ixesha nangayiphi na indlela. Uninzi lweetheminali okwangoku ezivenkileni zisinika i Inkqubo yeminwe yebhayometri ethintela ukufikelela kuyo. Olu khuselo luhamba kunye nekhowudi ukuze ngamaxesha apho ikhowudi ingafuni ukusebenza (izandla ezimanzi okanye ezinamabala) sinokufikelela ngaphandle kweengxaki.
Sinokukhetha kwakhona, ukuba sifuna ukhuseleko olongezelelweyo yongeza iphethini yokuvula, ukongeza ukhuselo olongezelelekileyo kwaye ukuba iyafumaneka kwiifowuni ezindala kunye neenguqulelo ezindala ze-Android, kuba kwi-iOS ekuphela kwendlela yokukhusela i-terminal kufikelelo olungafunekiyo yikhowudi yamanani ama-4 okanye ama-6.
Ezinye iiterminal, ezinje nge-iPhone X, ekuphela kokhuseleko esinalo kukusebenzisa ikhamera ye-ID ngaphambili, ikhamera qaphela ubuso bethu ngaphambi kokuqhubeka nokuvula i-terminal, ngaphandle kokusebenzisa iminwe yethu nanini na. Ngokusengqiqweni, esi siginali sikwasivumela ukuba singene kwikhowudi yamanani ukuze sikwazi ukuvula i-terminal ukuba obu buchwephesha abusebenzi ngokuchanekileyo, into eyenzeka kunqabile.
Uyifumana njani ifowuni yam ukuba ndiyilahlile
Uyifumana phi i-smartphone kwi-Android
Enye yeemfuno ukuze ukwazi ukusebenzisa i-Android terminal kukuba ne-akhawunti ye-imeyile kwi-Gmail. Le mfuno iya kusivumela ukuba sikhawuleze siyibeke i-smartphone yethu ngewebhusayithi kaGoogle ubeka kuthi kwaye apho kufuneka singenise idatha yeakhawunti yesiphelo sethu kwaye ukhethe i-terminal esiyikhangelayo (kwimeko yokuba nesiphelo esingaphezulu kwesinye kunye neakhawunti efanayo). Ke nasemva kwemizuzwana embalwa, imephu iya kusibonisa indawo esikuyo isiphelo sendlela yangoku okanye eyokugqibela de iphulukene nonxibelelwano lwayo.
Uyifumana njani i-smartphone ye-iOS
Ukufumana i-terminal yethu, kufuneka singene ngeICloud.com okanye ngokusebenzisa i-iOS application, faka idatha yeakhawunti apho i-terminal inxulumene nayo, khetha itheminali esikhangele kuyo (kwimeko apho i-ID inxulunyaniswa nesiphelo esingaphezulu kwesinye) kwaye ulinde imephu ukusibonisa indawo ethile ngalo mzuzu.
Kodwa ukwazi indawo yokugqibela, kuye kwafuneka sisebenzise ngokufumana i-iPhone yam kwisixhobo ngokwaso, esigciniweyo uqhagamshelo lokugqibela ngaphambi kokuphelelwa yibhetri, ukhetho ekufuneka lusebenze ngokungagqibekanga kuba kungenjalo indawo ebalulekileyo yalo msebenzi ilahlekile. Into esivumelayo kukuvula ukhetho ukuze xa idibanisa kwi-intanethi, isithumele umyalezo ngendawo ngqo yesiphelo, eya kuthi isivumele ukuba siqinisekise ukuba ibiwe.
Andilahlekanga ngefowuni, ibiwe
Okokuqala kufuneka siqinisekise i-100%. Ukuba emva kokuzama ukufumana i-terminal yethu, khange sibe nethamsanqa okanye nokuba ikwindawo esingakhange siyityelele, kufuneka siqhubeke nokwenza ingxelo ehambelanayo, nangona iimeko ezininzi zingasivumeli ukuba sibuyisele ifowuni kwaye qhubeka nokuthintela i-terminal ukude kwaye bonisa umyalezo obonisa inombolo yethu yomnxeba, ukuba ibilahlekile ngenene kwaye ifunyenwe ngumSamariya Olungileyo, ongakwaziyo ukufikelela kuyo, akanako ukunxibelelana nathi ukuba asibuyisele kuthi.
Thumela umyalezo kunye nedatha yethu kwi-smartphone yethu ye-Android
Ukuthumela umyalezo kwi-smartphone yethu ye-Android akufuneki nasiphi na isicelo okanye inkonzo enikezelwa ngumenzi wesiphelo sendlela, kuba lo msebenzi unikezelwa ngqo kuthi Inkonzo yendawo kaGoogle, inkonzo enye esinokuyisebenzisa ukufumana indawo esikuyo isiphelo sendlela.
Nje ukuba sikule webhusayithi, kwaye sikhethe i-terminal, siya kukhetho lweBhloko. Okulandelayo, iibhokisi ezimbini ziya kuboniswa ukuba kufuneka sigcwalise ngesimbo somyalezo "Ndilahlekelwe yifowuni, nxibelelana nam”Kwaye nenombolo yomnxeba apho uMsamariya Olungileyo ozimisele ukubuyisa i-terminal anokufikelela kuthi. Nje ukuba sigcwalise olu lwazi, siya kuqhubeka nokucofa iBhloko.
Okwalo mzuzu, i-terminal iya kuvalwa ngokupheleleyo kwaye ngalo lonke ixesha umntu efuna ukufikelela kuyo, baya kubona loo myalezo kwiscreen se-terminal. Inkqubo ye- kuphela kwendlela yokucima loo myalezo kukwenza ngeli phepha lewebhu, ke sinethamsanqa lokuba sikwazi ukuyifumana kwakhona, kufuneka silindwendwele eli phepha lewebhu kwakhona.
Thumela umyalezo kunye nedatha yethu kwi-iPhone yethu
Ukuthumela umyalezo kwisiphelo sethu, kufuneka singene ngeICloud.com okanye ngeSicelo sokuKhangela esifumaneka kwi-iOS ukuya sebenzisa imowudi elahlekileyo Kwisiphelo esilahlekileyo. Okokuqala kufuneka singenise igama lokugqithisa elinxulunyaniswa nesiphelo, ukuseka umyalezo kunye nenombolo yefowuni eya kuthi iboniswe kwisiphelo sendlela ngalo lonke ixesha uzama ukufikelela kuyo.
Le ndlela ibhloka ngokupheleleyo kwi-terminal nakweyiphi na inzame yokufikelela, nangona singazange ngaphambili sikhusele ukufikelela kuyo ngomnwe okanye ikhowudi yokhuseleko, ukhuseleko olunyanzelekileyo ukuba asifuni ukuba isiphelo sethu siphele kwizandla ezingalunganga kwaye inokubuyiselwa ukubeka kwimarike.
Yintoni ukusetyenziswa kokuthintela isiphelo sendlela?
Nokuba ulahlekelwe yifowuni okanye ibiwe, vala ifowuni njengoko benditshilo kwicandelo elidlulileyo, luxanduva oloUkuba asifuni ukuba isiphelo sethu sifike kwimarike kwakhona kwaye ukubiwa kweefowuni eziphathwayo kube yindlela elula yokufumana imali kubahlobo babanye.
Nokuba yindawo yokugcina i-Android okanye ukuba ilawulwa yi-iOS, akukho ndlela "esemthethweni" yokuvula ukufikelelakwisixhobo ngaphandle kokuba singabanikazi abafanelekileyo. Kwaye xa ndibhekisa kwindlela "yaseburhulumenteni", ndithetha isixhobo ongasifumana kwi-intanethi. Andibhekiseli kwizixhobo ezibiza kakhulu ezinokuthi zisetyenziswe ngoorhulumente ukufikelela kwezi ntlobo zeetheminali kwaye zifumaneka kwabambalwa kakhulu, apho abo babayo ii-mobiles bengenakufunyanwa.
Ukuba siphulukene nethemba lokufumana kwakhona i-smartphone yethu, inyathelo lokugqibela ekufuneka silenzile vala i-terminal nge-IMEI. Kwaye nditsho okokugqibela kuba ukuba ekugqibeleni siyifumene, kuyakufuneka silwe nabacinezeli ukuze sikwazi ukuyivula ifowuni kwakhona, kuba ukuvimba i-IMEI kulula, kodwa kungayisusi kuluhlu lweefowuni ezivaliweyo Le ndlela.
Ukuthintela i-IMEI yesiphelo kuyithintela ingaqhagamshelwa kuyo nayiphi na inkampani yefowuni zehlabathi, ke kwimeko engalindelekanga ukuba bakwazi ukufikelela kwisiphelo sendlela, abayi kuba nakho ukuyisebenzisa ngaphandle kokuba nephepha elinobunzima obuhle kwaye libiza kakhulu ngoqhagamshelo lweWiFi.
Uyifumana phi ifowuni IMEI
Ngaphambili, inombolo ye-IMEI yayi ecaleni kwebhetri yesiphelo, kodwa ngenxa yomkhwa wokwenza iiterminal zincinci, uninzi lwabavelisi bakhetha ukudibanisa ibhetri kwi-terminal ngaphandle kokubonelela ngamathuba okukwazi ukuyitshintsha ngaphandle kokuya kwinkonzo yezobugcisa.
Abanye babavelisi, abanjengoApple, bakhethe ukufaka inombolo ye-IMEI kwifayile ye- Itreyi yeSIM. Abanye bayibeka ngaphandle kwetheminali, ukwenza kube lula ukuyifumana xa kukho imfuneko. Kodwa, njengommiselo ngokubanzi, baninzi abasebenzisi abangazenzi nzima kwaye bafumane elo nani ngebhokisi yesiphelo, okoko beyigcinile.
Enye indlela yokufumana kwisiphelo ngokwasoUkufaka ikhowudi elandelayo kwisicelo sefowuni * # 06 # kwaye ucofe iqhosha lokufowuna. Kodwa ukuba silahlekile okanye sibile i-terminal, akukho nanye kwezi ndlela esebenzayo, ngaphandle kokuba sinayo ibhokisi, into ngelishwa abasebenzisi abaninzi abangayigciniyo.
Ukuba siyithengile ifowuni yasimahla okanye ngomsebenzisi, kwi-invoyisi efanayo inombolo ye-IMEI ikwakhona. Kuyacetyiswa, kwakamsinya nje ukuba uthenge ifowuni entsha, gcina le nombolo, umzekelo kuluhlu loqhakamshelwano, kuba zombini kwi-iOS nakwi-Android, sinokuvumelanisa idatha yethu nelifu kwaye sihlala sinokufikelela kuzo kwezi meko okanye nini sifuna ukudlula idatha ukusuka kwisiphelo esinye ukuya kwesinye ngokulula.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Tutorials » Iselfowuni yam ibiwe.Ndifanele ndenze ntoni?
Isizukulwana sesibini see-AirPods asiyi kuba namanzi kwaye siya kuvumela uSiri ukuba asebenze ngelizwi
E-China basebenza ngenqwelomoya ehamba ngamandla ukubhabhela e-United States ngeyure ezi-2